News | Tag: apf
सशस्त्रका आईजीपीले के के गरे ?
काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बलमा नेतृत्व फेरिएको पनि ठ्याक्कै एक वर्ष भएको छ । महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको एक वर्षको अवधि पनि मध्यम नै बितेको छ । उनले थोरै सुधारको प्रयास गरेका भने, अपेक्षअनुसार धेरै काम गर्न सकेका छैनन् ।
सशस्त्र प्रहरीको समस्याः बिरालोका ख्याल–ख्याल, मुसाको तीनकाल
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी कस्तो समस्या छ भने, ‘बिरालोको ख्याल, मुसाको तीनकाल’ भनेजस्तो ! आफ्ना गाडी बहालवाला र भूपू भिआइपीले धुस्नो बनाएर चलाइरहेका छन्, अति जरुरी युनिटचाँहि गाडी नहुँदा तीन जुनीमा गरेको पापको सजायँ एकैचोटि व्यहोरेकोजस्तो सास्ती खेपिरहेका छन् ।
सशस्त्रका डिअार्इजीविरूद्ध काठ दुरूपयाेग गरेकाे मुद्दा दायर
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरी बल सङ्खुवासभामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिअार्इजी) रामप्रसाद भण्डारीविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
महिलाकाे चुल्ठाे समाउने सशस्त्र प्रहरी बिना निलम्बन गुल्ममा तानिए
वीरगञ्ज । देशको प्रमुख नाका इनर्वाबाट जीविकोपार्जनका नाममा भन्सार छली गरी नेपाल भित्र्याउने कार्यमा सक्रिय रहेको भन्दै सशस्त्र प्रहरीबाट महिलामाथि दुर्व्यवहारको घटनाले राष्ट्रिय रूप लियाे ।
नायब महानिरीक्षकमा बढुवा भएका शसस्त्रका ६ जनालार्इ दर्ज्यानी चिह्न प्रदान
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षकमा पदोन्नती भएका ६ जनालाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरीको सेटिंगमा तस्करी
काठमाडौं । सीमा क्षेत्रबाट हुने तस्करी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको सशस्त्रकै संरक्षणमा कैलालीका विभिन्न नाकाबाट तस्करी बढेको छ ।
भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको उच्च सतर्कता
नवलपरासी । भारतसँग सिमाना जोडिएको पश्चिम नवलपरासीको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालयले उच्च सतर्कता अपनाएको जनाएको छ । सीमा क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षासहित दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्ने र सीमा स्तम्भ (पिलर) को समेत रेखदेखका साथै आपराधिक क्रियाकलाप, चोरी तथा तस्करी नियन्त्रणका लागि उच्च सतर्कता अपनाइएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक गाहारधन राईले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीका पाँच जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)ले बिहीबार राजीनामा दिएका छन् । पाँचै जना एआईजीले सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालमार्फत गृह मन्त्रालयमा राजिनामा बुझएका हुन ।
शसस्त्र प्रहरी बलमा यस्तो नयाँ संरचना लागू
काठमाडौं । अर्धसैनिक प्रकृतिको शसस्त्र प्रहरी बलको नयाँ संरचना तयार भएको छ । संघिय संरचनामा जाने उद्धेश्यका साथ यो संरचना तयार गरिएको हो । जस अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा बाहिनी स्थापना गरिने भएको छ ।